မည်သည့် ဓါးနဲ့လှီးလှီး ဓါးအရာတောင်မထင်.. တုတ်ပီး၊ ဒါးပီး၊ သေနတ်ပီးတဲ့ နွား – Tameelay
မည်သည့် ဓါးနဲ့လှီးလှီး ဓါးအရာတောင်မထင်.. တုတ်ပီး၊ ဒါးပီး၊ သေနတ်ပီးတဲ့ နွား
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကဘီခရိုင် အောင်လိမြို့တွင် နွားတကောင်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက မြက်မစား ပဲ ရော်ဘာပျိုးပင်လေးတွေကိုက်စား..ငှက်ဗျော်ဖူးတွေစားပြီးကြီးလာတယ်…
ကြာတော့ ရွာသားတွေဟာ ရော်ဘာပျိုးပင်လေးတွေကိုက်စားတာ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကိုမခံနိုင် နွားပိုင်ရှင်ကလျော်ကြေးပေးရနဲ့ ဆက် မမွေးတော့ပဲ ဒီနွားကိုသတ်ပြီးအမဲသားလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်..
ဒါပေမယ့် နွားဟာ ဘယ်လိုလည်လှီးလှီး ဒါးရာလေးတောင်မထင်. လည်မြို၊. ဝမ်းဗိုက်တို့ကို သံချွန်နဲ့ထိုးလည်း မပေါက်ဘူး…
သေနတ်နဲ့ပစ်လည်းကျည်ဆန်ရာပဲ့ထင်တယ်မပေါက်ဘူး…နောက်ဆုံး(၉)လုံးကျည်နဲ့ပစ်တာ.. တာင် ဘာမှမဖြစ်…
ကြာလာတော့ နွားပိုင်ရှင်လည်း သူ့နွားကိုသနားပြီး ကဘီမြို့ပေါ်က ဘန်းထုံးစတ်တိထမ်ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆရာတော်ဆီ သွားလှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်..။
ဆရာတော်ဆီရောက်တာတောင် နွားကိုစမ်းချင်သူတွေလာသေးတယ်တဲ့ ဆရာတော်ကတော့ ဒီနွား ဟာကျောင်းပိုင်နွားဖြစ်ပြီမို့ တိရိစ္ဆာန်ညဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြစ်တယ်…
မညျသညျ့ ဓါးနဲ့လှီးလှီး ဓါးအရာတောငျမထငျ.. တုတျပီး၊ ဒါးပီး၊ သနေတျပီးတဲ့ နှား
ထိုငျးနိုငျငံတောငျပိုငျး ကဘီခရိုငျ အောငျလိမွို့တှငျ နှားတကောငျဟာ ငယျငယျကတညျးက မွကျမစား ပဲ ရျောဘာပြိုးပငျလေးတှကေိုကျစား..ငှကျဗြျောဖူးတှစေားပွီးကွီးလာတယျ…
ကွာတော့ ရှာသားတှဟော ရျောဘာပြိုးပငျလေးတှကေိုကျစားတာ နဈနာဆုံးရှုံးမှုကိုမခံနိုငျ နှားပိုငျရှငျကလြျောကွေးပေးရနဲ့ ဆကျ မမှေးတော့ပဲ ဒီနှားကိုသတျပွီးအမဲသားလုပျမယျလို့ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ..
ဒါပမေယျ့ နှားဟာ ဘယျလိုလညျလှီးလှီး ဒါးရာလေးတောငျမထငျ. လညျမွို၊. ဝမျးဗိုကျတို့ကို သံခြှနျနဲ့ထိုးလညျး မပေါကျဘူး…
သနေတျနဲ့ပဈလညျးကညျြဆနျရာပဲ့ထငျတယျမပေါကျဘူး…နောကျဆုံး(၉)လုံးကညျြနဲ့ပဈတာ.. တာငျ ဘာမှမဖွဈ…
ကွာလာတော့ နှားပိုငျရှငျလညျး သူ့နှားကိုသနားပွီး ကဘီမွို့ပျေါက ဘနျးထုံးစတျတိထမျဘုနျးကွီးကြောငျး ဆရာတျောဆီ သှားလှူဒါနျးလိုကျပါတယျ..။
ဆရာတျောဆီရောကျတာတောငျ နှားကိုစမျးခငျြသူတှလောသေးတယျတဲ့ ဆရာတျောကတော့ ဒီနှား ဟာကြောငျးပိုငျနှားဖွဈပွီမို့ တိရိစ်ဆာနျညဉျးပနျးနှိပျစကျမှုဖွဈတယျ…
လက်ဖ၀ါးကိုကြည့်လိုက်ရင်လက္ခဏာလေးတွေရှုပ်ထွေးနေတာတွေ့ရပြီးလက္ခဏာဆရာတွေကတော့အချစ်ရေးဘ၀နဲ့အလုပ်အကိုင်စတာတွေကိုဟောပြောနိုင်ပါတယ်ဗေဒင်ရယ်လို့မဟုတ်ပေမယ့်စာဖတ်သူတို့အတွက်အပျော်သဘောအနေနဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းကပြောတဲ့အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ နှလုံးလမ်းကြောင်း နှလုံးလမ်းကြောင်းက လက်ဖ၀ါးရဲ့အလည် လက်သည်းရဲ့အောက်နားထိရောက်တဲ့ မျဉ်းကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကို အတူတူစပ်လိုက်လို့ နှလုံးလမ်းကြောင်းက လခြမ်းလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလား ဒါမှမဟုတ်တပြေးညီဖြစ်သွားလားဆိုတာကိုအရင်ကြည့်လိုက်နော်။ လခြမ်း သင်ဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပြီး စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဆတ်ဆတ်ထိမခံသူ ဟန်ဆောင်တာမကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ ဖူးစာစုံတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအရာတွေအားလုံးကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး …